ယောက်ျားတွေ ဘာကြောင့် အသည်းကွဲကြာရှည်ကြတာလဲ?? – Gentleman Magazine
ယောက်ျားတွေ ဘာကြောင့် အသည်းကွဲကြာရှည်ကြတာလဲ??
သင် ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာခိုင်မာ၊ ချစ်သူနဲ့ လက်တွဲဖြုတ်ရတာဟာ ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အရာ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ သင့်ပါတနာက ဘယ်လောက် ဆိုးဆိုးရွားရွား အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ် လက်တွဲဖြုတ်ရတာ နာကျင်ပြီးတော့ အချိန်တော်တော်ကြာထိ ဘဝမှာ ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်။
အမြင်မှာတော့ မိန်းမတွေဟာ လက်တွဲဖြုတ်ရင် ပိုပြီး နာနာကျင်ကျင် ခံစားရပြီး ကျွန်တော်တို့ ယောက်ျားတွေကတော့ အေးအေးဆေးဆေးဖြတ်သန်းသွားနိုင်တယ်လို့ ထင်ထားကြပါတယ်။ အဲဒါက မမှန်တဲ့အပြင် ပြောင်းပြန်ကြီးကို ဖြစ်နေတာပါ။ ယောက်ျားတွေဟာ ချစ်သူနဲ့ လက်တွဲဖြုတ်ရာက ရရှိတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာကို ကုစားနိုင်ဖို့ အချိန်ပိုယူရပါတယ်။
လေ့လာသူတွေဟာ နိုင်ငံပေါင်း ၉၆ နိုင်ငံက လူပေါင်း ၆၀၀၀ ကို စစ်တမ်းကောက်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်တမ်းက လမ်းခွဲချိန်မှာ ရရှိတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာ ကိုယ်ဒဏ်ရာကို ၀ ကနေ ၁၀ အထိ အဆင့်သတ်မှတ်ခိုင်းပါတယ်။ ၁၀ က အဆိုးရွားဆုံး ခံစားချက်ပါ။
အစမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမြင်က မှန်နေပါသေးတယ်။ မိန်းမတွေဟာ အစမှာ ပိုခံစားရပါတယ်။ စိတ်ဒဏ်ရာပိုင်းမှာ မိန်းမတွေက ၆.၈၄ ခံစားရပြီး ယောက်ျားတွေက ၆.၅၈ ပါ။ ကိုယ်ဒဏ်ရာမှာတော့ မိန်းမတွေရဲ့ ၄.၂၁ ဟာ ယောက်ျားတွေရဲ့ ၃.၇၅ ထက် ပိုများနေပါတယ်။ အဲဒါဟာ စိတ်အယူအဆ တိုးတက်လာလို့ ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။
မိန်းမတွေဟာ ချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုမှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ပိုများပါတယ်။ ခဏလောက် ချစ်ဇာတ်လမ်းလေးဟာ ၉ လကိုယ်ဝန်ဆောင်ရပြီး ကလေးကို ၁၈ နှစ် အရွယ်ရောက်သည့်တိုင်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ယောက်ျားတွေကတော့ လှေကားသုံးထစ်ဆင်းရင် လူပျိုဖြစ်တာပါပဲ။ အဲလိုနဲ့ အချိန်ကြာလာတော့ သဘာဝတရားဟာ မိန်းမတွေကို ပိုပြီး အဆင့်မြင့်တဲ့ ယောက်ျားတွေကိုပဲ ရွေးရအောင် စိတ်ဓာတ် အဆင့်မြှင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မိန်းမတွေဟာ လမ်းခွဲချိန်မှာ သူတို့ရွေးမိတဲ့ အဆင့်မြင့် ယောက်ျားတွေ ဆုံးရှုံးရလို့ ပိုခံစားရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မိန်းမတွေဟာ လမ်းခွဲချိန်မှာ နာကျင်ရသလောက် ပြန်ပြီး Recover ဖြစ်နှုန်း ပိုကောင်းပါတယ်။ သူတို့အတွက် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အရာကို ရှောင်လိုက်ရသလို ခံစားမှုလေး ရှိနေလို့ပါ။ ယောက်ျားတွေကတော့ ပြောင်းပြန်ပါပဲ။ လမ်းခွဲရတာ ကြာလာလေ ဘဝဟာ ပိုခက်ခဲလာလေပါ။
ယောက်ျားတွေဟာ ဆုံးရှုံးရတဲ့ ခံစားချက်ကို အချိန်အကြာကြီး ခံစားရပြီးတော့မှ သူဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကို ပြန်ပြီး အစားထိုးဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက သူဆုံးရှုံးခဲ့တာက အစားထိုးမရတဲ့ အရာဆိုတာကို သိရှိလိုက်တဲ့ အချိန်ပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေဟာ Single ဘဝကို ပိုပြီး နှစ်သက်သလို ပြောတတ်ကြပေမယ့် အဲဒါဟာ Single ဖြစ်ရတဲ့ ဘဝဟာ ခက်ခဲနေလို့ ဖုန်းကွယ်ပြီး ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံနိုင်ပေမယ့် သင် အရင်ဆုံး ရောဂါမပါတဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖော်ကို မနည်းရှာရမှာပါ။ သင့်ဘဝမှာ အချစ်ခံစားမှုလေးတွေ မပါရင်လဲ ပျော်စရာ မကောင်းပါဘူး။ မိန်းမတွေ လမ်းခွဲချိန်မှာ နွေးနွေးထွေးထွေး နှစ်သိမ့်ပေးမယ့်သူ အမြောက်အများက စောင့်ကြိုနေပါတယ်။ ယောက်ျားတွေ ပြန်ပြီး ဘဝမှန် ပြန်ရဖို့ ကြိုးစားချိန်မှာ မိန်းမတွေဟာ ဘဝမှာ ပြန်လည်ပျော်ရွှင်နေပါပြီ။
ယောကျြားတှေ ဘာကွောငျ့ အသညျးကှဲကွာရှညျကွတာလဲ??
သငျ ဘယျသူပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ဘယျလောကျပဲ စိတျဓာတျခိုငျမာခိုငျမာ၊ ခဈြသူနဲ့ လကျတှဲဖွုတျရတာဟာ ခကျခဲပငျပနျးတဲ့အရာ ဖွဈမယျဆိုတာ သခြောပါတယျ။ သငျ့ပါတနာက ဘယျလောကျ ဆိုးဆိုးရှားရှား အမြိုးသမီးဖွဈဖွဈ လကျတှဲဖွုတျရတာ နာကငျြပွီးတော့ အခြိနျတျောတျောကွာထိ ဘဝမှာ ခကျခဲနပေါလိမျ့မယျ။
အမွငျမှာတော့ မိနျးမတှဟော လကျတှဲဖွုတျရငျ ပိုပွီး နာနာကငျြကငျြ ခံစားရပွီး ကြှနျတျောတို့ ယောကျြားတှကေတော့ အေးအေးဆေးဆေးဖွတျသနျးသှားနိုငျတယျလို့ ထငျထားကွပါတယျ။ အဲဒါက မမှနျတဲ့အပွငျ ပွောငျးပွနျကွီးကို ဖွဈနတောပါ။ ယောကျြားတှဟော ခဈြသူနဲ့ လကျတှဲဖွုတျရာက ရရှိတဲ့ စိတျဒဏျရာကို ကုစားနိုငျဖို့ အခြိနျပိုယူရပါတယျ။
လလေ့ာသူတှဟော နိုငျငံပေါငျး ၉၆ နိုငျငံက လူပေါငျး ၆၀၀၀ ကို စဈတမျးကောကျခဲ့ပါတယျ။ စဈတမျးက လမျးခှဲခြိနျမှာ ရရှိတဲ့ စိတျဒဏျရာ ကိုယျဒဏျရာကို ၀ ကနေ ၁၀ အထိ အဆငျ့သတျမှတျခိုငျးပါတယျ။ ၁၀ က အဆိုးရှားဆုံး ခံစားခကျြပါ။
အစမှာတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အမွငျက မှနျနပေါသေးတယျ။ မိနျးမတှဟော အစမှာ ပိုခံစားရပါတယျ။ စိတျဒဏျရာပိုငျးမှာ မိနျးမတှကေ ၆.၈၄ ခံစားရပွီး ယောကျြားတှကေ ၆.၅၈ ပါ။ ကိုယျဒဏျရာမှာတော့ မိနျးမတှရေဲ့ ၄.၂၁ ဟာ ယောကျြားတှရေဲ့ ၃.၇၅ ထကျ ပိုမြားနပေါတယျ။ အဲဒါဟာ စိတျအယူအဆ တိုးတကျလာလို့ ဖွဈတယျလို့ ထငျရပါတယျ။
မိနျးမတှဟော ခဈြဇာတျလမျးတဈခုမှာ ရငျးနှီးမွှပျနှံမှု ပိုမြားပါတယျ။ ခဏလောကျ ခဈြဇာတျလမျးလေးဟာ ၉ လကိုယျဝနျဆောငျရပွီး ကလေးကို ၁၈ နှဈ အရှယျရောကျသညျ့တိုငျအောငျ ပွုစုပြိုးထောငျရတဲ့အထိ ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။ ယောကျြားတှကေတော့ လှကေားသုံးထဈဆငျးရငျ လူပြိုဖွဈတာပါပဲ။ အဲလိုနဲ့ အခြိနျကွာလာတော့ သဘာဝတရားဟာ မိနျးမတှကေို ပိုပွီး အဆငျ့မွငျ့တဲ့ ယောကျြားတှကေိုပဲ ရှေးရအောငျ စိတျဓာတျ အဆငျ့မွှငျ့ပေးလိုကျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ မိနျးမတှဟော လမျးခှဲခြိနျမှာ သူတို့ရှေးမိတဲ့ အဆငျ့မွငျ့ ယောကျြားတှေ ဆုံးရှုံးရလို့ ပိုခံစားရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ မိနျးမတှဟော လမျးခှဲခြိနျမှာ နာကငျြရသလောကျ ပွနျပွီး Recover ဖွဈနှုနျး ပိုကောငျးပါတယျ။ သူတို့အတှကျ အန်တရာယျရှိတဲ့ အရာကို ရှောငျလိုကျရသလို ခံစားမှုလေး ရှိနလေို့ပါ။ ယောကျြားတှကေတော့ ပွောငျးပွနျပါပဲ။ လမျးခှဲရတာ ကွာလာလေ ဘဝဟာ ပိုခကျခဲလာလပေါ။
ယောကျြားတှဟော ဆုံးရှုံးရတဲ့ ခံစားခကျြကို အခြိနျအကွာကွီး ခံစားရပွီးတော့မှ သူဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကို ပွနျပွီး အစားထိုးဖို့ ကွိုးစားပါတယျ။ ပိုဆိုးတာက သူဆုံးရှုံးခဲ့တာက အစားထိုးမရတဲ့ အရာဆိုတာကို သိရှိလိုကျတဲ့ အခြိနျပါပဲ။
ကြှနျတျောတို့ လူငယျတှဟော Single ဘဝကို ပိုပွီး နှဈသကျသလို ပွောတတျကွပမေယျ့ အဲဒါဟာ Single ဖွဈရတဲ့ ဘဝဟာ ခကျခဲနလေို့ ဖုနျးကှယျပွီး ပွောတာ ဖွဈပါတယျ။ သငျ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ မိနျးကလေးနဲ့ လိငျဆကျဆံနိုငျပမေယျ့ သငျ အရငျဆုံး ရောဂါမပါတဲ့ လိငျဆကျဆံဖျောကို မနညျးရှာရမှာပါ။ သငျ့ဘဝမှာ အခဈြခံစားမှုလေးတှေ မပါရငျလဲ ပြျောစရာ မကောငျးပါဘူး။ မိနျးမတှေ လမျးခှဲခြိနျမှာ နှေးနှေးထှေးထှေး နှဈသိမျ့ပေးမယျ့သူ အမွောကျအမြားက စောငျ့ကွိုနပေါတယျ။ ယောကျြားတှေ ပွနျပွီး ဘဝမှနျ ပွနျရဖို့ ကွိုးစားခြိနျမှာ မိနျးမတှဟော ဘဝမှာ ပွနျလညျပြျောရှငျနပေါပွီ။
Previous: ယောက်ျားနို့တွေ ဘယ်လို အပျောက်ဖျောက်မလဲ
Next: ယောက်ျားများအတွက် အဝတ်အစား